Tesla waa saamiga ugu horreeya ee lagu tago dadweynaha calaamadda saamiga Binance - Bitcoinxxo
Binance wuxuu soo bandhigi doonaa ganacsiga calaamadda saamiyada, warbaahinta shisheeye ayaa ku warantay waqtiga maxalliga ah ee 12aad.
Waxaa lagu soo warramay in saamiga ugu horreeya ee calaamadaha saamiyada Binance uu noqon doono samaynta gawaarida korantada ee Tesla.
Calaamad kasta oo cusub oo la soo saaray waxay ka dhigan tahay saamiyad waxaana lagu xallin karaa Binance’s stablecoin, Binance USD (BUSD).
Binance wuxuu yiri ikhtiyaarka maalgashiga cusub, Equity Tokens, wuxuu u oggolaan doonaa maalgashadayaasha inay kaqeybqaataan suuqyada maaliyadeed ee waaweyn iyadoo layareynayo kharashaadka wax kala iibsiga.
Waxyaabaha loo yaqaan ‘Equity tokens’ maahan saamiyada, laakiin waxay siiyaan maalgashadayaasha xaq ay ku maalgashadaan hantida shirkad gaar ah, sida maalgashiga saamiyada. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan kaydka dhaqameed, astaamaha saamiyada ee Binance waa la qaybin karaa, markaa waad maalgashan kartaa saamiyaal gaar ah inta aad rabto.
si fudud u dhig Si ka duwan saamiyada lagu kala iibsado qaddar go’an qayb kasta, waa suurtagal in la iibsado oo lagu iibiyo qaybo qayb ahaan sida hantida dalwaddii. Sidan oo kale, saamiyada qaaliga ah waxaa lagu iibsan karaa qiimo jaban iyada oo aan loo kala qaybin saamiyada kala duwan. Xitaa dadka leh raasamaal yar waxay u qaybin karaan saamiyada shirkadaha qaaliga ah waxayna iibsan karaan saamiyada Tesla oo u qalma 1,000 guuleystey.
Warkan, qiimaha calaamadda Binance ee u gaarka ah, Binance Coin (BNB), ayaa cirka isku sii shareeraya.
Waxaan kula talinaynaa qoraallo dheeri ah